उत्साह के हो? परिभाषा
उत्साह के हो ? फ्रेन्चमा शब्दको अर्थ "वातावरण", "वातावरण", "वातावरण" हो। यो अवधारणा भाषणमा प्रयोग गरिन्छ एक निश्चित स्थितिमा विशेष वातावरणलाई जोड दिन। आर्किटेक्चरल एकाउन्टेसन वातावरणको एउटा जटिलता हो, जसमा परिस्थितिहरू अनुमानित वस्तु स्थित छ। यसको चित्र विशेष रूप देखि मुखौटा वा परिप्रेक्ष्य छवि को वास्तुकला चित्रमा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभािन्छ। प्रशिक्षण रेखाचित्र उत्तेजकमा (शब्दको अर्थ त्यहि हो) तपाईंलाई ठीक तरिकाले संरचना निर्माण र प्रोजेक्टको प्रस्तुति कसरी बनाउने भनेर सिकाउँदछ। यसले कलात्मक गुणहरूको विकास गर्न योगदान गर्दछ, विकास र ग्राफिक कौशलमा सुधार गर्दछ। अक्सर वातावरण को छवि भवन को रूप मा एक नै भूमिका निभािन्छ।
जस्तै हामीले पहिले नै व्याख्या गरेका छौं, उत्तेजक (शब्दको अर्थ) अनुमानित वस्तुको स्थान र उद्देश्य अनुसार प्राकृतिक वा वास्तविक वातावरणको चित्र को अनुरुप गर्दछ। वातावरणको वास्तुकला चित्रमा छविले सही रूपमा परियोजनाको मात्रालाई बुझ्न मद्दत गर्दछ र भविष्यमा वस्तुको धारणालाई पनि दयालु बनाउँछ। तर एकै समयमा, इन्टर्नेटमा प्रवेश गर्ने तत्वहरूको प्राकृतिकता खोज्न आवश्यक छैन। आर्किटेक्चर ग्राफिक्सले केहि निश्चित शैलीको लागि अनुमति दिन्छ, वरपरका परियोजना वस्तुहरूको अधिवेशन - इलाका, हरियो ठाउँ, साना फारमहरू, व्यक्तिको आकृति र यति। निस्सन्देह, उत्तेजक छवि वस्तुसँग एउटै स्टाइलिस्टमा हुनुपर्छ। अन्य शब्दहरुमा, प्रोजेक्ट छवि को रूप मा पुरा तरिकाले को रूप मा बुझिन्छ। यो सबै आर्किटेक्चरल चित्रका लागि रंग, कम्पोजिकल र ग्राफिकल डिलिवरी विधिहरू: योजना, facades, खण्डहरू, परिप्रेक्ष्य वा अक्षोमेट्रिक छवियोंका साथ प्राप्त गरिन्छ। यसैले, अनुमानित वस्तु संग वास्तविक वातावरण को समग्र एकता को एक स्पष्ट र प्रदर्शनकारी प्रदर्शन प्राप्त भएको छ।
विवरणको संतृप्ति द्वारा रेखाचित्रको उत्प्रेरित फरक हुन सक्छ। वातावरणको छवि निश्चित रूपमा अलग हुन सक्छ, यदि पूर्णतया अनुपस्थित छैन। कहिलेकाहीँ वास्तुशिल्प रेखाचित्रमा उत्प्रेरित धेरै कम अर्थहरू (केवल मानिसहरूको छवि वा एकल स्थानको साथ हरियो रोपणको समूह) लाई प्रसारित गरिन्छ। यो हुन्छ र उपाध्यक्ष, जब उत्प्रेरित (शब्द को अर्थ एक सीधा अर्थ छ) व्यापक रूपमा पेश गरिएको छ। यसैले, रंगको वातावरण र प्रत्याशित वस्तुको वातावरणको प्रकृतिलाई प्रसारण गरिएको छ। यद्यपि, सबै परिस्थितिहरुमा उत्प्रेरक को कार्य वास्तुकला को रचनात्मक डिजाइन प्रकट गर्न को लागी छ। वरिपरीको ठाउँको छवि मुख्य एक ओभरल्याप गर्नु हुँदैन - वस्तु आफै, जुन परियोजनाको मुख्य र मुख्य तत्व हो। यो महत्वपूर्ण छ कि सबै घटक एक ग्राफिक तरिका मा क्रियान्वित गरिन्छ, संगठित रूप देखि, होलानिक रूप देखि र, परिणाम को रूप मा, समाप्त संरचना को माथि बनाइयो।
वास्तुकला डिजाइन को अतिरिक्त, उत्साह (शब्द को एक नै छ) को रूप मा व्यापक रूप देखि फिल्म निर्माण र थियेटर कला मा प्रयोग गरिन्छ । यस अवस्थामा, दृश्य र पोशाकहरू सिर्जना गर्न ग्राफिक प्रविधि प्रयोग गरिन्छ।
सेन्ट पीटर्सबर्गमा रूसी नेशनल लाइब्रेरी: हालको आधारबाट
एक नैतिकवादी हो?
एक विद्वान एक अहंकार या उनको पूर्ण विपरीत को उच्चतम डिग्री हो
रेडियोबिना: काम सिद्धान्त, उपकरण, भागहरु, सञ्चालन मार्गदर्शन
कजाख दही मा baursaks: नुस्खा
चमडा जैकेट कसरी लियो
भेटिकन भुक्तानी $4अर्ब। बच्चा molestation लागि दावी मा